Gịnị bụ Nchọpụta Nchọpụta Organic Gị? | Martech Zone
N'abalị a, enwere m biya na ezigbo enyi na otu onye ọrụ Kristian Andersen. Firmlọ ọrụ Kristian bụ ụlọ ọrụ na-enweghị atụ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ na mpaghara na nke mba yana Kristian bụ onye ndụmọdụ onwe onye.
Mkparịta ụka ọ bụla mụ na Kristian na-eme ka m nwee ume - anyị na-agbagha nghọta nke ibe anyị gbasara etu azụmahịa si arụ ọrụ, etu sọftụwia dị ka ọrụ si arụ ọrụ, otu esi arụ ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe… ị nweta isi!
Mụ na Kristian tụlere ịde blọgụ n'abalị a ma ụlọ ọrụ ya nwere afọ ojuju na ikpo okwu na usoro ha na-eji. Ọ bụghị na echeghị m na ha na-arụ nnukwu ọrụ - otu Kristian na-ede ọdịnaya dị egwu. Ihe m gbara aka na Kristian bụ ma ọ bụrụ na blog anaghị ezukọta ezuola ike ịchọpụta ihe.
Nke ahụ nwere ike ịdị ka hoopla, mana ọ bụghị. Ọ bụrụ na ị na-ede blọgụ ugbu a, olee otu ị ga - esi mara ma ọ na - arụ ọrụ? Na KA si azum, ha na-eche na ndị ndu na usoro branding, imewe na ahịa ohere. Kedu do ị tụrụ nke ahụ? Ọ bụ n'ezie mara mma dị mfe.
Kristian Andersen + Associates bụ a multi-inye ika ika na ahụmahụ imewe ndụmọdụ. Anyị na-enyere ụlọ ọrụ aka ịkọwapụta, ịkọwapụta na imezu atụmatụ aghụghọ na ahụmịhe ndị ọrụ na-eme ka ịga nke ọma ogologo oge.
Iji ya Semrush, Achọpụtara m posts na blog blog KA nke na-anya ụgbọ ala, yana isiokwu ndị a na-achọta maka blọọgụ ahụ, ogo nke ibe ndị dị na nsonaazụ ahụ, usoro ọchụchọ ọchụchọ metụtara, yana kwa ọnwa nke isiokwu / ahịrịokwu nke ọ bụla. okwu:
Onye Kraist (Rankdị 6, fficzọ 81.53%, Mpịakọta Mpịakọta: 170)
Christian andersen (Rankdị 1, fficzọ 13.51%, Mpịakọta Mpịakọta: 91)
Christian andersen (Rankdị 2, fficzọ 3.69%, Mpịakọta Mpịakọta: 12)
ebumnuche dị mkpirikpi na ogologo oge (Rankdị 11, fficzọ 0.63%, Mpịakọta Mpịakọta: 22)
ka a (Rankdị 5, fficzọ 0.18%, Mpịakọta Mpịakọta: 0)
ogologo oge na obere okwu mgbaru ọsọ (Rankdị 8, fficzọ 0.18%, Mpịakọta Mpịakọta: 140)
googlereader mkpanaka (Rankdị 4, fficzọ 0.09%, Mpịakọta Mpịakọta: 260)
anakpo (Rankdị 14, fficzọ 0.09%, Mpịakọta Mpịakọta: 16)
dị iche iche na sundry (Rankdị 19, fficzọ 0.09%, Mpịakọta Mpịakọta: 16)
Indianapolis ibj (Rankdị 18, fficzọ 0%, Mpịakọta Mpịakọta: 390)
andersen ọhụrụ (Rankdị 1, fficzọ 0%, Mpịakọta Mpịakọta: 46)
Yabụ na ọtụtụ puku ndị ndu azụmaahịa na-achọ ịntanetị maka ndụmọdụ na onye ndu na ịme akara, kedu ka blog Kristian si enweta ume na oghere a? Mgbalị ndị otu Kristian na-etinye na ịde blọgụ nwere ike ịkwụ ụgwọ maka nnabata ya na ndị asọmpi na ndị ahịa, mana ekwenyeghị m na ọ na-akwụ ụgwọ iji nweta ntụkwasị obi na ikike na azụmaahịa ndị na-eme nyocha na weebụ nke abụọ a!
Okwu ole na ole na KA blog bụ ogo maka ụgbụ ihe dịka 1,100 na-enyocha kwa ọnwa, mana nke ahụ abụghị esemokwu. Ihe iseokwu bụ na okwu ndị ahụ adịghị mkpa n'ihe KA na-enye ndị na-ege ha ntị. Ochoo yiri imewe ụdị, ika azum, na ika ize net karịrị 10k ọchụchọ kwa ọnwa.
Ajụjụ a abụghị ma ị nwere nnukwu blog, ajụjụ a bụ ma blọọgụ gị na-eru oke ike ya. Ime nyocha isiokwu dị na okwu ndị na-ege gị ntị na-achọ ga-enye gị ọnụọgụ ole na ole ugboro ole achọrọ okwu ndị ahụ. Ọ ga - enye blọgụ gị ntuziaka maka usoro iji dee ihe ị na - ede.
Cheta na: Kristian nyere m mma iji bipụta akwụkwọ a - nke ahụ bụ etu nwoke ahụ si dị ukwuu! Echere m na enwere ikike dị na blọọgụ ya ma enwere m olileanya na ọ ga-amalite iche echiche banyere ike iru ndị folk nọ ebe ahụ na-achọ nduzi na nduzi ya siri ike!
Tags: ika izeika azummbọnnnyocha nyochaChristian andersenorganicnyocha ihenwere
Microsoft Na-arịọ Google Ka O Wee Were Market Email
Jun 24, 2009 na 1:20 AM
Kedu, ihe bụ ihe ahụ Amazon S3?
Achọrọ m ime ka ọdịnaya m dị mkpa ma baa uru, maka ogologo oge. Eziokwu ahụ bụ na ụfọdụ mmadụ na-eji oge edemede ha ‘n’elekọta’ ihe ha mere maka injin ahụ na-echegbu m.
Blọọgụ bụ okwu onwe onye na azụmaahịa, ọ nweghị ihe ọzọ.
N'ezie ga-achọ ịma banyere ihe Amazon ahụ ọ bụ ezie na…
Jun 24, 2009 na 9:12 AM
Infofọdụ Ama na Amazon S3. Ana m agbanye faịlụ mgbasa ozi m niile site na Amazon ugbu a, ọ na-eme ka arụmọrụ m dịkwuo mma.
Jun 24, 2009 na 8:32 AM
“Na-eme nnyocha nyocha banyere isiokwu ndị na-ege gị ntị na-achọ”
Kedu ihe ị na-eji eme nke a?
Jun 24, 2009 na 9:10 AM
M kwuru nnukwu ngwá ọrụ n'elu, SEMRush. Ọ na - enyere gị aka ịhụ etu eserese saịtị gị, yana ịlele isiokwu, nsonaazụ organic na oke ọchụchọ I nwedịrị ike nyochaa saịtị ndị asọmpi iji hụ ihe isiokwu ha na-enweta site na. A free obibia bụ iji Google's Search based isiokwu nke ngwa ọrụ ma ọ bụghị dị ka siri ike.
Jun 25, 2009 na 7:22 AM
Daalụ maka nzaghachi Doug.
Ọkt 23, 2009 na 2:14 AM
Right na ego, Doug. Nke a esighi ike ịghọta na KA na-ada ka mmadụ na-egbuke egbuke. Ekwenyesiri m ike na ha amaliteworị irite uru site na ndụmọdụ gị ndị ị na-eche n'echiche.